अर्थमन्त्री खतिवडा र भारतीय वित्तमन्त्रीबीच भेटघाट:
नेपालमा रहेका ५ सय र एक हजारका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह
भारतमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । भारतीय वित्त मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा ठूलो परिमाणमा रहेका ५ सय र एक हजारका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भारत सरकारले भारु ५ सय र १ हजारका नोट प्रचलनमा बन्देज लगाउनु भन्दा पहिले नेपालमा मौज्दात भारुको सटही सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । भारतबाट नेपालतर्फ जाने व्यक्तिले आफूसँग लैजान पाउने ठुला दरका भारु नोट फर्काउने सम्बन्धमा द्विविधा भएकाले त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी आवश्यक सुचना जारी गरिदिन समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
सो भेटमा नेपालको विकासका लागि भारत सरकारवाट प्राप्त सहयोगका लागि अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले धन्यवाद दिए । साथै द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पछिल्लो आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरण तथा राजस्वका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयास, द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य सन्धिलगायत विषयमा समेत दुई अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा भारतसँग भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न भारत सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।